-အမျိုးသားညီညွတ်‌ရေးအစိုးရက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို ရ… – PVTV Myanmar
-အမျိုးသားညီညွတ်‌ရေးအစိုးရက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို ရ…
-အမျိုးသားညီညွတ်‌ရေးအစိုးရက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို ရေးဆွဲမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝကို ကြီးကြပ်ပေးမည့် ကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်း
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အရာရှိ Mr. Tom Andrews တို့တွေ့ဆုံ
-အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ အင်တာနက်ထိန်းချုပ်ရေးကို အကူအညီမပေးကြဖို့ နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က တိုက်တွန်းစတဲ့ PVTV ရဲ့ ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
Like – 8.6K Share – 1271
2021-05-19 at 5:11 PM
Thet Aung Mon says:
EAOတွေ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရော အားလုံးပါဝင်နိုင် လက်ခံနိုင်မယ့် မူကြမ်းဖစ်ပေါ်လာပါစေဗျာ
S S Studio says:
2021-05-19 at 6:19 PM
ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စ ည်းပုံအခြေ ခံဥပဒေမူကြမ်းအမြန်ဆုံးရေးဆွဲနိုင်ပါစေအမြန်ဆုံးအတည်ပြုနိုင်ပါစေ
ケン タイ says:
2021-05-19 at 6:21 PM
U Aik Sai says:
2021-05-19 at 6:24 PM
တိုင္းရင္းသားပါတီအမ်ားစုႏွင့္ခုခံစစ္ဆင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးက လက္ခံထားေသာ fcdcc ဒု မူၾကမ္းကို ျဖည့္စြက္သင့္ျပင္ဆင္သင့္တာကိုစုေပါင္းဝိုင္းဝန္းညိႇႏိႈင္းၿပီး အျမန္အတည္ျပဳရင္သာ၍ျမန္ဆန္ထိေရာက္မည္။ NUG/CRPH ၏ယခုေၾကျငာထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစပါလိမ့္မည္။ အရာရာမွာငါ့လက္ငါ့ေျခ ငါဦးေဆာင္မွရမည္ဆိုေသာ ေတြးေခၚယူဆမႈကို စြန္႔ခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ သာလြန္အမ်ားစုအင္အားဆႏၵကိုဆြဲကိုင္က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း ဒီမိုကေရစီ အာဏာရွင္အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရပါမည္။ NCGUB ရဲ႕အားနည္းအားသာခ်က္ကိုသင္ခန္းစာယူၿပီး အေကာင္းဆံုးအျမန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုပါသည္။ 👌👌💪💪
2021-05-19 at 6:32 PM
2021-05-19 at 6:38 PM
2021-05-19 at 6:49 PM
2021-05-19 at 7:03 PM
အားလုံးပါဝင်ရေးဆွဲထား တဲ့ ဆွဲပြီးသား‌ FCDCC မူကြမ်း က ဘာ ဖြစ် လို့လဲ ဗျ
2021-05-19 at 7:09 PM
2021-05-19 at 7:46 PM
Do not hesitate if Kachin, Karen and Chin want to separate. Rule by their leaders. Let them separate.
2021-05-19 at 8:34 PM
နိုင်ငံသားများကိုစုံစမ်းရန် မြန်မာစစ်တပ်က ဆက်သွယ်ရေးတယ်လီကွန်းကဏ္ဍကို ဘယ်လိုအကွက်ရွှေ့ခဲ့သလဲ
Tint Naing Win says:
Minmin Tun says:
2021-05-19 at 8:43 PM
2021-05-19 at 9:06 PM
Min Zoe Naing says:
2021-05-19 at 9:44 PM
2021-05-19 at 9:52 PM
Zawzaw Zaw says:
မွန်ပဲခံရတော့မာ်ထင်တယ် အခွင်ရေး ရတဲ့အချိန်မှာပါဝင်စေချင်
2021-05-19 at 10:13 PM
Ngwe Thazin Aung says:
2021-05-20 at 12:36 AM
Kwee Kwee Kwee Kwee says:
ကူးလ်ကစ် တဲတဲ says:
2021-05-20 at 5:26 AM
Nwe War Sue says:
2021-05-20 at 4:06 PM
ခွေးဖြစ် နေသည် says:
2021-05-20 at 5:04 PM
Sad but true 😊😊👍
U U Gyi says:
အချိန်ဆိုတာ နေဝင် မိုးချုပ်
2021-05-22 at 12:44 AM
Ko Khine Mg Thein says:
2021-05-22 at 10:21 AM
2021-05-22 at 6:44 PM
“နွေဦးအသံ” နေ့စဉ်လက်ကမ်းသတင်းလွှာ အမှတ် (၄၅) ထုတ်ဝေ…
“ကျမတို့ရဲ့ အဓိကစိုးရိမ်မှုက ကလေးတွေရဲ့ လုံခြုံမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ လုံခြုံတဲ…